PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-10 - LEHLE KAKHULU IZINGA LOMCIMBI WAMA-SAMA
LEHLE KAKHULU IZINGA LOMCIMBI WAMA-SAMA
Ilanga langeSonto - 2018-06-10 - Siyahlaziya - LUCKY CAIN
LIYAQHUBEKA nokwehla izinga lomcimbi wesouth African Music Awards okuwumcimbi othathwa njengomkhulu wokuklomelisa abaculi eningizimu Afrika.
Abaningi bazongivumela ukuthi selokhu kwahoxa isikhondlakhondla senkampani IMTN azikaze ziphinde zifane izinto kulo mcimbi. Ngeledlule ngibe nenhlanhla yokuphinde ngibe yingxenye yabathola ithuba lokuhambela lo mcimbi kanti bengingaqali ukuwuhambela.
Abawuhambelayo lo mcimbi kusukela kudala bayazi ukuthi phambilini bekucaca kusenezinsuku ukuthi kuza umcimbi waMASAMA, kwazise iningi labaculi belikhombisa intshisekelo kanti nalabo abebeqokiwe beku- ba yibo abafaka umfutho kubalandeli babo ngokuqokwa kwabo.
Kulo nyaka nje lowo mfutho ubukeke ungekho mandla uma kuqhathaniswa nangeminyaka engaphambilini.
Okwenze kwasheshe kwacaca kuhle kwezinqe zesele ukuthi izinto ziyabheda kumasama wukungabibikho kwemicimbi eyahlukene eyandulela lo mcimbi (pre parties).
Eminyakeni eyedlule imicimbi eyandulela AMASAMA ibiba ngaphezulu kwemibili noma emithathu kanti yonke ibigcwala phama abathandi bobumnandi.
Kulo nyaka bekucwebe isiziba - abebetheleke esun City baphoqeleke ukuba bazihlanganisele obabo ubumnandi ngolwesihlanu ngaphambi kosuku lomcimbi. Kuphinde kwacaca nangawo umgqibelo ukuthi isasasa kalikho ngaleyo ndlela njengoba iningi losaziwayo belingabonwa nangalukhalo.
Bekuyilabo nalabo nje. Okushayele isipikili engingathi ngesokugcina yilokhu engikubone kwenzeka, kokuba osaziwayo abaningi bangabi nawo umdlandla wokungena ngaphakathi emcimbini.
Iningi labo ligcine ukubonakala kukhaphethi obomvu maqede lanyamalala ngaphambi komcimbi, layozihlalela ndawondawo.
Ngizibonele futhi ngazizwela abanye bosaziwayo belibeka ngembaba elokuthi “sesivelile sabonakala kukhaphethi obomvu, sesiqedile sesiyoziphuzela, ngoba kuyabhora ngaphakathi”.
Nakuba besenginalo ulwazana oluncane ngokuthi abantu bazizwa kanjani ngokungena ngaphakathi kodwa ngiphikeleli- le ngangena kwazise bengiyosebenza.
Ngeke ngiqambe amanga, ngizisolile ngoba asikho isimanga esitheni njengoba nabaphathi bohlelo akukho okungale abakwenzile ukuze ngithokozele ukuba ngaphakathi.
Ngiyamncamela umuntu obewabuka ezihlalele kwakhe ngoba akukho engingathi uphuthelwe yikho. Abaphathi bohlelo usomizi Mhlongo, umpho Pops nodineo Ranaka bebenza abakuthunyiwe kuphela.
Angazi noma kuzomele ngimsole usomizi noma ngisole abaqondisi balo mcimbi ngokungamkhululi abe yilo Somizi abamthandayo abantu.
Ubezibandela nje kulo mcimbi kungathi ubenqindwe amandla. Ngeke ngikwazi ukuphawula ngalaba banye abaphathi bohlelo ngoba abangihlabanga umxhwele kodwa vele bengingalindele okutheni kubona.
I- after party kubukeke ngathi izamile ukuba nobumnandi kodwa iningi labantu lisheshe lacikwa wukuthi bekugcwele kunganyakazeki labe selishesha lizihambela.
Kulabo abasalile bakwazile ukujuxuza bathokozela ubumnandi kwazise bekuboshelwe ODJ abathandwayo kuyona.
Masethembe ukuthi ngonyaka ozayo kuzoba nokuthile okuzosenza sisukumele phezulu uma sibona isimemo salo mcimbi. Angazi noma kuzomele abahleli bawo basukume babhukule bawumakethe baphinde bathungathe abaxhasi abazokwazi ukufaka umfutho ozonikeza abantu ugqozi.